Maalinta: Noofambar 20, 2017
Xilliga cusub ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada Sanliurfa: basaska waxay socon doonaan saacadaha 24
Waqtiga cusub ee gaadiidka dadweynaha ee Şanlıurfa ayaa la bilaabay. Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaaladu waxay soo bandhigtay codsi 24-saac ah ee gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Adeegga gaadiidka dadweynaha cusub ee xaafadda 9 ee Diyarbakir
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, oo sii wadata howlaheeda loogu talo galay adeega gaadiidka dadweynaha oo ku fududaan oo raaxo leh, ayaa dhistay labo wado oo cusub oo daboolaya 9 duleedka degmada Sur waxaana ay gaarayaan 20 kun oo qof tan iyo 3kii Nofembar. [More ...]
Qorshaha mashruuca aad ku leedahay mustaqbalkaaga wuxuu noqon doonaa mid baahsan
Qeybta Qorsheynta Gaadiidka iyo Dowlada Hoose ee Gaziantep iyo Nidaamka Tareenka iyo Xiriirka Baaskiilada waxaa si wada jir ah u fulin doona kulanka mashruuca ee Sen De Pedalla tanıtım. Kulan, mid la soo xulay [More ...]
Kuxigeenka Ciidanka AK Party Metin Gündoğdu, Mashruuca Tareenka Samsun-Sarp; Insanlar Dadka dhahaya waxaan qaadi karnaa Samsun-Sarp oo aan daawan karnaa muuqaalka, isticmaalnaa tareenka xawaaraha sare ku socda oo qaadan kara meelaha dalxiis ee Badda Madoow, dabeecadda, cagaarka [More ...]
CHP Burdur Mehmet Göker wuxuu sameeyay bayaan qoraal ah oo ku saabsan wadada loo maro HAT. Bayaanka, YHT'nin wuxuu maraa bartamaha Burdur, Isparta wuxuu sii mari doonaa magaalada Burdur wuxuuna sii mari doonaa degmada Antalya ee la sheegayo inuu gaaro. HALKAN KA DHAGEYSO [More ...]
Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkey Kırklareli taariikhda sanadka soo qaaday 100 tallaabo kuwaas oo jawaab ah dhismaha saldhigga. TCDD dib casilay ... Turkey Tareennada State (TCDD) Kırklareli saldhigga 100 sano taariikhda [More ...]
Akcaray oo dhex maraysa waddada way hoos tagtaa oo dhan!
Wadada tareenka ee horteeda Aqalka Cadaaladda ee Kocaeli ayaa ku dhowaad gacan ku hayntiisa. Wadada laamiga waxaa ka buuxa baabuur habeen iyo maalinba, mana jirto meel dadka lugeynaya loo tago. [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada 17 ayaa jabisay rikoorkii tirada rakaabka ee la dhoofiyay Jimcihii, Noofembar iyada oo kumanaan muwaaddiniin ah loo adeegsaday xariijin metrooga. Wadarta tirada rakaabka ee lagu raray dhamaan khadadka metrooga hal maalin 2 milyan [More ...]
Akbil cunning ayaa la bilaabay baadhitaan
Xafiiska dambi baarista ee Bakırköy, metro iyo metrobus ayaa istaaga halkii qof kale isagoo riixaya kaarka, wuxuu bilaabay baaritaan ku saabsan macaashka cadaalad darrada ah ee dadka. Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Bakırköy, adoo riixaya kaarka bedelida qof kale oo jooga metro iyo metrobus oo joogsan, [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa ka wada hadashay Miisaaniyadda Sanadka 2017 iyo Barnaamijka Waxqabadka ee Agaasimaha Guud ee IETT, mid ka mid ah laxiriirayaasha IMM, kulamadii Noofembar ee 2018. Maareeyaha Guud ee IETT Arif [More ...]
RayHaber 20.11.2017 Warbixinta Shirka
Adeegga Ijaarka Gawaarida waxaa laga qaadi doonaa Nadiifinta iyo Adeegga Rasaasta Kuleylinta waa la qaadi doonaa
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, Raiisul wasaare ku xigeenka Hakan Çavuşoğlu oo ay wehliyaan maalgashiga socda iyo qorsheynta ee ka socota Bursa, iyo sidoo kale meelaha dhibaatooyinka wadooyinka ay ka baarayaan hawada. Maanta waa maalintii uu xafiiska qabtay [More ...]
Saacadda 24 ee Ankara Gaadiidka aan kala go '
Adeegga gaadiidka ee magaalada Ankara ee aan kala go 'lahayn ee hakadka la galiyay saacadaha 24, ka dib markii lagu dhawaaqay maareeyaha guud ee shirkadda EGO Balamir Gündoğdu ee Güvenpark basku istaago 24.00 habeenkii, darawalada basaska iyo [More ...]
Rikoor cusub oo ka socda Garoonka Rize-Artvin
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, labaad Turkiga, dunida waxaa lagu dhisay-badda saddexaad Rize iyo Artvin Airport 8-10 mitir lagu sameyn doonaa qoto dheer, wuxuu sheegay in ay sidoo kale waa rikoor cusub. wax soo saarka [More ...]